postmarketOS yakawedzera chinongedzo che smartwatch | Linux Vakapindwa muropa
Iyo postmarketOS vashanduri (kugoverwa kweLinux kwemafoni efoni ayo ari pamusoro peAlpine Linux, Musl uye BusyBox) kuziviswa Mazuva mashoma apfuura vakashandisa kugona kushandisa smartwatch mushandisi interface zvichibva pabasa reiyo AsteroidOS chirongwa
AsteroidOS, iri yakazara FOSS smartwatch mushandisi interface iyo yakavakirwa pane Mer stack uye inoshandiswa zvakare neGlacier. Sisitimu yezvinhu inogadzirwa uchishandisa zvinokudziridzwa kubva kuOpenEmbedded chirongwa, icho chinopa maturusi ekugadzira kugoverwa kweGNU / Linux kwemaitiro akadzika.
Rangarira kuti iko kugovera postmarketOS yakatanga kugadzirirwa mafoni uye yakapa kugona kushandisa akasiyana mushandisi maficha, kusanganisira KDE Plasma Mobile, Phosh, uye Sxmo.
ari vanofarira vanga vachigadzira postmarketOS chiteshi cheiyo LG G Watch uye LG G Watch R smartwatches kwemakore akati wandei Izvo kusvika ikozvino ave akaganhurirwa nekuda kwekugona kubhurawuza mumutsetse wekuraira modhi, sezvo echinyakare makanda emafoni efoni anowanikwa pane postmarketOS inorema uye yakashata kune akadaro madhivha.
Mhinduro yaive yekugadzira chiteshi cheiyo Asteroid interface, yakanyatsogadzirirwa smart wachi. Icho chinongedzo chakatemwa chinogadzirwa neiyo AsteroidOS chirongwa uye chakashandiswa pekutanga pamwe chete neMer system nharaunda. Asteroid inosanganisira sarudzo yezvakakosha zvewatchwatch zvinoshandiswa zvakanyorwa muQt 5 uchishandisa QML uye ichimhanya mune iyo asteroid launcher's shell nharaunda, kusanganisira inoumbwa neserver yakavakirwa paWayland protocol.
Izvi ndizvo zvakakonzerwa nekubatana pakati peboka reAsteroid uye mushambadzi we postmarketOS Bart Ribbers (Pure TryOut), izvo zvakatungamira mukuzara kweUI kuzere.
Rimwe danho mune ino nzira rinobva kuna mugadziri Luca Weiss (z3ntu), anonzi ari kushanda pachiteshi cheLinux cheiyo LG G Watch R (codename »lenok«), inogona kuve smartwatch yekutanga. "Yechokwadi" Linux haina kumbonzwa of.
Kubatana nechikwata, AsteroidOS inoshandisa iyo libhybris layer, inova yakatetepa yeGlibc-based system kupa madhairekitori akanangana neApple anomhanya munzvimbo yemushandisi uye akabatana neBionic system raibhurari kuti ishande paGlibc based system. Nerubatsiro rwe libhybris, zvave zvichitokwanisika kushandisa isingazivikanwe Android binary mutyairi weQualcomm GPU papuratifomu yeMer.
Izvi zvinosanganisira kushandiswa kwevatyairi veplatform yeApple, asi iyo postmarketOS-yakagadzirira chiteshi inogadziriswa kuti ishandise yakajairwa Linux mutyairi stack. Chiteshi chakagadzirirwa pamwe chete nevakagadziri veiyo AsteroidOS chirongwa.
Izvo zvinoonekwa kuti kuoneka kweiyo Asteroid chiteshi mu postmarketOS ichabvumidza chikuva kuti chive chinowirirana zvizere nemawadhi akangwara uye kutanga kutamira kune zvishandiso zvitsva. Kutsiva iyo firmware ne postmarketOS inogona kunge iri mhinduro inonakidza yekuenderera mberi nehupenyu hweakare mawatchwatches, ayo nguva yemutsigiro yemugadziri yatopera.
Ngatirangarirei kuti chinangwa cheiyo postmarketOS chirongwa ndechekupa mukana wekugona kushandisa kugoverwa kweGNU / Linux pane chinhu chakangwara (chinonyanya kukoshesa mafoni), mukuwedzera pakuzvimiririra nehupenyu hwerutsigiro hwehutongi. firmware uye isina kubatana neyakajairwa mhinduro yeakakosha vagadziri veindasitiri iyo inoratidza iyo vector yekuvandudza.
Iyo postmarket nharaundaOS yakabatana zvakanyanya sezvinobvira uye inounza pamwechete zvese zvakasarudzika zvikamu yeiyo mudziyo mune yakasarudzika package, ese mamwe mapakeji akafanana kune ese madhivha uye akavakirwa pane akajairwa Alpine Linux mapakeji ayo anosarudzwa seimwe yeakanyanya compact uye akachengetedzwa kugoverwa, nepo kune Linux kernel chikamu ichi chakabatanidzwa kubva kune linux- sunxi chirongwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » postmarketOS yakawedzera chimiro che smartwatch